Wasiirka Warfaafinta oo daah furay mashruuc qaliin guud ah oo loogu adeegayo bulsho tabaaleysan “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federalka Soomaaliiya Eng, Cabdirahman Cumar Cisman (Yariisow) ayaa maanta Daah furay Mashruuc Qaliin guud ah oo ay fulintiisa iska kaashanayaan Mu’asasada Macalim Nuur Maxamed Siyaad iyo Isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Munaasabadda Mashruuca lagu daah Furayay waxaa ka qeyb galay Wasiiru dowlaha Madaxooyada Soomaaliya, Mudane Khaliif Cabdulqaadir Macalim Nuur oo sidoo kale ah Guddoomiyaha Mu’asasada Macalim Nuur Maxamed Siyaad, Madaxda Istibaalka Aadan Cadde oo ay ka mid yihiin Dr. Cismaan Aadan Cabdulle iyo Dr. Maxamuud Maxamed Zaahid, Dhaqaatiir ajaanib ah oo ka qeyb qaadaneysa Qaliinka, Dr Mahad iyo Agaasimaha Caafimaadka ee Mu’asasada Macalim Nuur Dr Mustaf Muxudiin
Mashruuca Qaliinka oo socan doona muddo bil ah ayaa waxaa looga faa’iideynayaa 435 Bukaan oo danyar ah, kuwaas oo qaba xanuuno kala duwan.
Dr Maxamuud Saahid Maxamed iyo Dr Cusmaan Aadan Cadde oo ka mid ah masuuliyiinta sare ee Cusbitaalka Aadan Cadde ayaa sheegay in ay talaabadan ay tahay mid wanaagsan ayna u diyaar u yahiin u adeegidda bulshada danta yar.
Mid ka mid ah dadka ka faa”iideystay olalahan qaliinka guud oo la hadlay Warbahinta Qaranka ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay adeegga caafimaad ee loo sameeyay.
Wasiir Yariisow ayaa waxa uu uga mahad celiyay Mu’asasada Macalim Nuur iyo Isbitaalka Aadan Cadde mashruuca bulshada looga faa’iideynayo, waxa uuna rajeeyay in mustaqbalka la fulin doono Mashaariic kale oo shacab badan ka faa’iideestaan.
Tani waa talaabo muujinayso in bulshada Soomaaliyeed ay dhexdooda isku gar gaaran.
Howgallo laga fuliyay deegaanno hoostaga Degmada Beladweyne